Baradho basbaas leh oo leh chorizo ​​| Cunnooyinka jikada
Baradho Baasto leh
Maria vazquez | 06/06/2021 10:00 | Cunnooyinka Mashiinka iyo maraqa
Aniga oo ka faa'iideysanaya xaqiiqda ah in maalmihii ugu dambeeyay ay roob da'ayeen isla markaana ay ku qaboobeen woqooyiga, waxaan soo jeedinayaa qodobo aad u fudud oo aan inta badan isticmaalno inta lagu jiro bilaha ugu qabow sanadka: baradhada basbaaska leh chorizo. Aniga oo ah kuwa jecel stews, ma joojin karo soo jeedinta tan, mid ka mid ah kuwa ugu fudud ee aan ku diyaarino guriga.
Baradhadu, chorizo ​​iyo waxyaabo kale oo yar oo ku jira fuudkan. Taas macnaheedu maaha inaadan ku dari karin waxyaabo kale si aad uga dhigto mid dhameystiran. Qaar digaag la jarjaray, tofu, ama tempeh ku habboonaan lahayd isla'egta. Iyo sida lasocod, wax lamid ah a salad cagaaran.
40 daqiiqo, uma baahnid wax intaa ka badan si aad u hesho fuudkan diyaarka ah. Taladaydu waxay tahay mar alla markii aad u dhaadhacdo, samee ku filan inaad ku hagaajiso cuntada laba maalmood oo kale. Waxa aadan ku sameyn karin fuudkan waa in aad barafoojiso waana sida aan horay u soo hadalqaadnay marar kale baradhada si fiican ugama jawaab celin howshan.
2-4 qaado oo saliid saytuun ah oo bikro ah oo siyaado ah
1 basal cad oo waaweyn
2 basbaas cagaaran
12 xaleef chorizo ​​basbaas leh
½ qaado yar oo kulul (ama macaan) paprika
1 qaado oo hilib basbaas chorizo ​​ah
Iska jar basasha iyo basbaaska kuna kari digsi dhawr qaado oo saliid ah 10 daqiiqo.
Kadib kudar chorizo, baradho diiray oo guji iyo xilli. Sauté dhowr daqiiqo adigoon joojin walaaqa ilaa chorizo ​​uu sii daayo qayb ka mid ah baruurtiisa.
Marka xigta, waxaan ku darnaa paprika, hilibka basbaaska chorizo ​​iyo waxaan ku daboolaynaa maraq khudradeed.
Waxaan daboolnaa qasriga iyo Isku kari ilaa 15-20 daqiiqo ama ilaa baradho jilicsan.
Waxaan ku raaxeysanay basbaaska kulul, baradhada kulul ee leh chorizo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Mashiinka iyo maraqa » Baradho Baasto leh
Digir baradho macaan iyo hilib doofaar la dubay